LEGOLAND ၀ င်ဇော်ဟိုတယ်သည်အငယ်တန်းဆောက်လုပ်ရေးအပတ်ကိုယခုနှစ်ဝက်ကျင်းပမည်
27 / 01 / 2019 26 / 01 / 2019 ဂရေဟမ် 1080 Views စာ0မှတ်ချက် Lego, ဥပဒေ, Legoland Castle ဟိုတယ်, LEGOLAND ဟိုတယ်, LEGOLAND ဝင်ဆာအပန်းဖြေစခန်း
ဒီတစ်ဝက်သက်တမ်းမှာ LEGOLAND Windsor Resort မှဟိုတယ်များဟာဖန်တီးမှုနှင့်တည်ဆောက်မှုအထိမ်းအမှတ်အဖြစ်အငယ်တန်းတည်ဆောက်သူအပတ်ကျင်းပမှာဖြစ်ပါတယ်။
Junior Builder Week သည်ဖေဖော်ဝါရီ ၁၅ ရက်မှ ၂၃ ရက်အထိ LEGOLAND ဟိုတယ်နှင့် LEGOLAND Castle ဟိုတယ်၌ LEGOLAND Windsor အပန်းဖြေစခန်းသို့ပြန်လည်ရောက်ရှိမည်။ တစ်ညလျှင်လူတစ် ဦး လျှင်ပေါင် ၄၈ မျှသာရှိလျှင်မိသားစုများသည်ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွင် ၀ င်ရောက်လုပ်ကိုင်နိုင်သည်။ တစ်ပတ်လုံး။ Theme ဥယျာဉ်သည်မတ်လအထိ 15 ရာသီအတွက်မဖွင့်နိုင်ပါ။
လူငယ်တည်ဆောက်သူများသည် p လုပ်နိုင်လိမ့်မည်artတည်ဆောက်ရေးအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများ၊ အမြန်တည်ဆောက်ခြင်းဆိုင်ရာစိန်ခေါ်မှုများနှင့်အဆောက်အအုံတစ်ခုတည်ဆောက်ခြင်း။ အငယ်တန်းဆောက်လုပ်သူရက်သတ္တပတ်တွင်ထိပ်တန်းဆုရအဖြစ်နေ့အတွေ့အကြုံအတွက် Model Maker နှင့်အတူ Clue Quest လည်းပါ ၀ င်သည်။ ထိုမှဝင်ရောက်ခွင့်ရှိလိမ့်မည် Lego တည်းခိုခန်း, Lego အုတ်တွင်း, ရုပ်ရှင်တွင်းနှင့် Lego တစ်ပတ်အတွင်းဂိမ်းကစားခြင်း.ရိယာ။
ညနေခင်းအတွေ့အကြုံတွင်ညစာပါဝင်သည် Lego စားသောက်ဆိုင်၊ စားသောက်ဆိုင်၊ ဇာတ်ကောင်နှင့်တွေ့ဆုံခြင်း၊ Emmet ၏ Master Builders ပြသခြင်း၊ အုတ်တံမှော်ပြပွဲနှင့်ပျော်ရွှင်စရာဖြည့်ထားသောဒစ္စကိုစarty.
LEGOLAND Windsor Resort တွင်လက်မှတ်နှင့်တည်းခိုခန်းများကိုကြိုတင်မှာယူနိုင်ပါသည် တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်.
၏လုပျငနျးကိုထောကျပံ့ဆက်လက် Brick Fanaticsကျေးဇူးပြု၍ ဝယ်ပါ Lego ကနေအစုံ shop.LEGO.com နှင့် အမေဇုံ ငါတို့သုံးနိုင်သည် တွဲဖက်လင့်ခ်များ.
← LEGO Technic 42090 နှင့် 42091 Ultimate4×4combi ပုံစံ
LEGO Movie သည် Unikitty ၏ရှုထောင့်မှပြန်လည်ပြောပြသည် →